Izindaba - Market graphite electrode report analysis global
Graphite electrode emakethe umbiko ukuhlaziywa global
UDUBLIN, NOV. 30, 2020
isibikezelo semakethe se- ”graphite electrode kuya ku-2027 - umthelela we-covid-19 kanye nokuhlaziywa komhlaba wonke ngohlobo lomkhiqizo (amandla aphezulu, amandla aphezulu kakhulu, amandla ajwayelekile); Isicelo (isithando somlilo se-arc, i-ladle furnace, abanye), kanye nejografi ”kungezwe kumbiko wocwaningo i-markmarkmarkmark.com.
Imakethe yalinganiselwa kithi ama- $ 6,564.2 million ngo-2019 futhi kulindeleke ukuthi ifinyelele ku- $ 11,356.4 million ngo-2027;
Kulindeleke ukuthi ikhule ku-cagr ka-9.9% kusuka ku-2020 kuya ku-2027.
I-graphite electrode iyinto ebalulekile ekukhiqizweni kwensimbi ngendlela ye-arc furnace (eaf) kagesi. ngemuva komjikelezo onzima weminyaka emihlanu, isidingo se-graphite electrode saqala ukukhuphuka ngo-2019, kanye nokukhiqizwa kwensimbi ye-eaf. ngamazwe ahlonipha kakhulu imvelo futhi athuthukile emhlabeni, umshicileli ulindele ukukhula okuzinzile ekukhiqizeni insimbi ye-eaf kanye nokufunwa kwe-graphite electrode kusuka ngo-2020-2027.
Imakethe kufanele ihlale iqinile kokungezwa komthamo we-graphite electrode.
Njengamanje, imakethe yomhlaba wonke ilawulwa yisifunda se-asia pacific esibala ama-58% emakethe yomhlaba ngokuhlanganyela. ukufunwa okuphezulu kwama-electrode e-graphite avela kulawa mazwe kubangelwa ukukhuphuka okukhulu kokukhiqizwa kwensimbi engahluziwe. ngokuya ngenhlangano yensimbi yomhlaba, ngo-2018, i-china ne-japan bakhiqize amathani ayizigidi ezingama-928.3 no-104.3 wensimbi ongahluziwe ngokulandelana.
Ku-apac, amakhekhe e-arc kagesi anesidingo esikhulu ngenxa yokukhuphuka kwesikhumba sensimbi nokwanda kokunikezwa kwamandla kagesi eChina. Amasu akhulayo emakethe ezinkampani ezahlukahlukene ku-apac akhuthaza ukukhula emakethe ye-graphite electrode esifundeni.
abahlinzeki abaningi bensimbi esifundeni saseNyakatho Melika bagxile kakhulu ekutshaleni imali kumaphrojekthi wokukhiqiza insimbi. ngoMashi 2019, abahlinzeki bensimbi e-us - kufaka phakathi i-steel dynamics inc., nathi i-steel corp., ne-arcelormittal - basitshale imali engamaRandi ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-9.7 isiyonke ukukhulisa amandla abo okubhekela izidingo ezweni lonke.